Fampidirana ny fitaovana nify YUCERA
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-30
Any amin'ny faritra ara-toekarena manokana any Shenzhen, Shenzhen Yurucheng / YUCERA Dental Material Co., LTD dia orinasa feno misahana manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary marketing ny Dental Zirconia Ceramic Block. Amin'ny maha-matihanina mpamokatra Dirc Zirconia Block, fitsipika Yurucheng Cherish ...
Dia iray vaovao fampidirana indostrialy, mifandray tanana ary mamorona toko vaovao
Ny Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd., izay nametraka haavo vaovao isaky ny avy, dia nanomboka fotoana manan-tantara manan-danja. Tamin'ny 12 aprily 2021, Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. ary ny Home Technology Co.
Fifaninanana fahaiza-manao momba ny asa voalohany an'i Yucera
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-23
Ny fifaninanana fahaiza-manao asa voalohany nataon'i Yucera ho an'ny fitaovana zirconia block dia nanomboka tamin'ny 12 Jolay, izay notohanan'ny Biraon'ny General Manager. Nozaraina telo ny hetsika iray manontolo: fisoratana anarana sy fandinihana, fifaninanana eo an-toerana, ary sarin'olon-droa manome loka. Maherin'ny 30 co ...
Miorena tsara amin'ny tanjonao ary manohiza mamporisika.
Ny fivoriana famintinana fanao isan-taona nataon'i Yu Rucheng tamin'ny taona 2021 dia natao hanomezam-boninahitra. Teo ambany fitarihan'ny tale jeneraly Andriamatoa Liu Jianjun, tonga niaraka tamin'ny nofinofisin'izy ireo ny sangany amin'ny departemanta marketing, mamintina ny tsy fisian'ny asa amin'ny tapany voalohany amin'ny ...
Inona no atao hoe Zirconia Block?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-17
Araka ny fantatsika rehetra, misy karazana fitaovana telo ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny nify: fitaovana zirconia block sy fitaovana vy. Zirconium oxide dia miseho amin'ny endrika kristaly monoclinika, tetragonal ary cubic. Ny ampahany voadio tanteraka dia azo amboarina toy ny endrika kristaly toratelo sy / na tetragonaly. Mba hahafahan'ny stabi ...
Tsy nanakana ny dian'izy ireo handroso mihitsy i Yucera.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-06-22
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina ny vatan-kazo ceramic zirconia CAD CAM, i Yucera dia manana ny iraka "hanolo-tena hamokatra akora zirconia nify avo lenta sy mahasalama ary manangana marika zirconia nify malaza eran'izao tontolo izao"; Tsy nanakana ny dian'izy ireo handroso mihitsy i Yucera. Con ...
Ny Dental South China 2021 International Exhibition dia nifarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fifaranana.
avy amin'ny admin tamin'ny 21-06-17
Ny Dental South China 2021 International Exhibition dia nifarana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fifaranana. Shenzhen Yurucheng Dental Materials Co., Ltd. manohy mandroso mialoha! Ny nify efatra andro Ka ...
Dental Zirconia Block Material
Tsy ny vovoka zirconia azo vidiana ara-barotra no mitovy. Ny fahasamihafana eo amin'ny vokatra amin'ny haben'ny voam-bary sy ny additives dia mifehy tsara ny tanjaky ny zirconia block, ny fitoniana maharitra ary ny tsy fetezany. 1. Ankoatr'izay, ny fizotran'ny fiovan'ny nify ...
101-201, tranobe 4, sampana No.1 an'ny Zhongcheng Life Science Park, No. 14, Zhongxing Road, Xiuxin Community, Biraon'ny Kengzi Street, Distrikan'i Pingshan, Shenzhen, Sina.